yini i-HDMI 2.1 Ukucaciswa; | I-Huachuang Electronic
HDMI 2.1 Ukucaciswa
Ukucaciswa kwe-HDMI ® 2.1 isibuyekezo sakamuva kakhulu sokucaciswa kwe-HDMI futhi isekela uhla lwezinqumo eziphezulu zamavidiyo kanye namanani wokuvuselela kufaka phakathi i-8K60 ne-4K120, nezinqumo ezifika ku-10K. Amafomethi we-HDR e-Dynamic nawo asekelwa, futhi amandla we-bandwidth akhuphuka aze afike ku-48Gbps.
Ukusekela i-bandwidth ye-48Gbps yikhebula elisha le-Ultra High Speed ​​HDMI. Ikhebula liqinisekisa ukuthi izici zokuthembela eziphakeme kakhulu ze-bandwidth zilethwa kufaka ividiyo engacindezelwanga ye-8K nge-HDR. Ifaka i-EMI ephansi ngokweqile (ukuphazamisa i-electro-magnetic) okunciphisa ukuphazamiseka ngamadivayisi angenantambo angenantambo. Intambo ibuyela emuva iyahambelana futhi ingasetshenziswa ngesisekelo esivele sifakiwe samadivayisi we-HDMI.
Ukuvezwa kwesici se-HDMI 2.1 izici eziphezulu zifaka:
Ukulungiswa kwevidiyo ephezulu kusekela uhla lwezinqumo eziningi eziphakeme kanye namazinga wokuvuselela okusheshayo kufaka phakathi i-8K60Hz ne-4K120Hz ngokubuka okugxilile kanye nemininingwane yokushesha esheshayo. Izinqumo ezifika ku-10K nazo zisekelwa i-AV yezentengiso, nokusetshenziswa kwezimboni nakukhethekile.
Ukuxhaswa kwe-Dynamic HDR kuqinisekisa mzuzu ngamunye wevidiyo kukhonjiswa ngamanani ayo afanele wokujula, imininingwane, ukugqama, ukuqhathanisa nemidwebo ebanzi ebanzi — endaweni yesehlakalo noma ngesisekelo sohlaka.
I-Ultra High Speed ​​HDMI Cable isekela i-48G bandwidth yokuxhaswa okungafakwanga kwe-HDMI 2.1. Ikhebula libuye libe nokukhishwa okuncane kakhulu kwe-EMI futhi kubuye emuva kuyahambisana nezinguqulo zangaphambi kokucaciswa kwe-HDMI futhi zingasetshenziswa ngamadivayisi akhona we-HDMI.
Ikhebula le-Ultra High Speed ​​HDMI enelebula